राम्रा युवतीलाई नायिका बनाउने बहानामा बलात्कार गर्ने अमन यसरी जाकीए प्रहरी खोरमा,यस्तो पाइयो चर्तिकला - हाम्रो ईकोनोमी
राम्रा युवतीलाई नायिका बनाउने बहानामा बलात्कार गर्ने अमन यसरी जाकीए प्रहरी खोरमा,यस्तो पाइयो चर्तिकला
किशोरीलाई नायिका बनाइदिन्छु भन्दै बलात्कार गरेको आरोपमा एक फोटोग्राफरलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। चितवनको खैरहनी–१३ घर भई काठमाडौंको नयाँ बानेश्वर बस्ने अमन तामाङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
तामाङले आफू कलाकार भएको र धेरै निर्देशकसँग चिनेको विश्वासमा पारी किशोरीलाई नायिका बनाउने प्रलोभन दिएका थिए। फिल्मका लागि कुरा गर्न भन्दै होटलमा बोलाएर उनले किशोरीमाथि यौनशोषण गरेका हुन्।
फरार रहेका तामाङविरुद्ध किशोरीको जाहेरीका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त गौशालाले पक्राउ गरेको हो। उनी पेसाले फोटोग्राफर भएको गौशाला वृत्तका डिएसपी अनुपम श्रेष्ठले बताए। सुरुमा उनले किशोरीलाई नयाँ बसपार्कको होटलमा बोलाएर बलात्कार गरेका थिए। पछि गौशालाको होटलमा बोलाएर नायिका बनाइदिने भन्दै सम्बन्ध राखेका थिए। त्यसपछि फरार उनी पक्राउ परेका हुन्।
तामाङसँग युवतीको फेसबुकमार्फत चिनजान भएको थियो। फेसबुक च्याटमा तामाङले आफू कलाकार भएको भन्दै भ्रममा पारेका थिए। उनी सामान्य कार्यक्रम तथा बिहेहरुमा फोटो खिच्ने काम गर्दै आएका थिए।
मोबाइल स्वीच अफ गरेर फरार रहेका तामाङलाई प्रहरीले १८ गते पक्राउ गरेको हो। जर्बजस्ती करणी मुद्दामा उनीविरुद्ध कारबाही अघि बढाइएको डिएसपी श्रेष्ठले बताए।
उता आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा रामेछापमा एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।
उमाकुण्ड गाउँपालिका–४ रारागाउँ बस्ने ५३ बर्षीय ताराबहादुर सुनुवारलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।
सुनुवारले उनकै श्रीमती ४४ बर्षीया सुर्यकला सुनुवारलाई घरायसी बिबादमा काठको पिर्काले टाउकोमा हिर्काउँदा घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। पक्राउ परेपछि आफुले गल्ती गरेको भन्दै उनी पछुताएका छन्।
त्यस्तै बुधबार मोरङ र गोरखामा भएका सवारी दुर्घटनामा २ जनाको मृत्यु भएको छ।
मोरङको सुन्दरहरैचा नगरपालिका–९ सलकपुरस्थित पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा को.२८ प २१९२ नम्बरको मोटरसाइकलले बुधबार ठक्कर दिँदा गम्भीर घाइते भएका पैदलयात्री सोही नगरपालिका–१२ बस्ने ५३ बर्षीय टेकबहादुर परियारको नोबेल अस्पताल बिराटनगरमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ। मोटरसाइकल चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
गोरखाको गोरखा नगरपालिका–९ बिरिनचोकस्थित गोरखा–आँबुखैरेनी सडक खण्डमा बा.३ ख ४६५८ नम्बरको माइक्रोबस बुधबार सडकमा पल्टेर दुर्घटना हुँदा तनहुँ आँबुखैरेनी–१ बस्ने १६ बर्षीया श्रद्धा गौली सहित २० जना घाइते भएकोले उपचारको लागि जिल्ला अस्पताल गोरखा लैजाने क्रममा श्रद्धा गौलीको बाटोमै मृत्यु भएको छ । घाइतेहरुमध्ये ६ जनालाई एम्बुलेन्सद्धारा बिएण्डबि अस्पताल काठमाडौँमा पठाइएको र माइक्रोबस चालकलाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।
विश्व विजेता अमेरिकन खेलाडीले सन्यास लिएर हिन्दु धर्मको प्रचारक बनेपछि
बुबा–आमाकाे दुर्व्यबहारले कति पटक मर्ने प्रयास गरेँ,म हुर्केकाे समाजनै गलत छः सावित्री सुवेदी
अस्ट्रेलियामा १००० नर्सिङ पढने नेपाली विद्यार्थीको बिचल्ली , हेर्नुहोस भिडियो सहित, क कसले ठगे
अस्ट्रेलिया जान नक्कली बिहे
कहिलेसम्म आइरहन्छ यसरी भुकम्प ? तर्साको तर्साइ
यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा विद्यार्थीले त्रिवि सहायक डीनलाई दले मोसो
शाहरुखकी छोरी सुहाना यी युवासँग डेट गर्न चाहन्छिन्
Economy And Creative Media House Anamnagar, Kathmandu. Tel: +977 9841316593 +97714812173 Email: [email protected]